१५० हिन्दु तीर्थयात्रीहरू बाढीमा फसे
क्वेटा । क्वेटाको बोलान काच्ची क्षेत्रबाट अलपत्र परेका १५० हिन्दु तीर्थयात्रीहरूलाई पाकिस्तानी सेनाले उद्धार गरेका छन् । क्वेटाको नासहरबाद र जाफरबाद शहरका बासिन्दाहरु तथा भक्तजनहरु उँट चढेर 'बैसाखी फ...
प्यालेस्टाइनमा प्रधानमन्त्री मोहम्मद शेटीयले लिए सपथ
प्यालेस्टाइन । प्यालेस्टाइनका राष्ट्रपति महमुद अब्बासले २२ मन्त्रीहरुसहित प्रधानमन्त्री मोहम्मद शेटीयलाई शपथ ग्रहण गराएका छन् । रमाल्लामा प्यालेस्टाइनी अधिकारीहरुको उपस्थितिमा राष्ट्रपति अब्बासले शन...
क्यालीफोर्निया। विश्वको सबैभन्दा ठुलो विमानले क्यालीफोर्नियामा आफ्नो पहिलो परीक्षण उडान सम्पन्न गरेको छ । यसमा ६ बोइङ ७४७ इन्जिन जडान गरिको छ । हिजो(शनिबार) सो विमानले आफ्नो पहिलो यात्रा तय गर्नका ला...
२७ तालिवान लडाकूको मृत्यु
जलालाबाद । अफगानिस्तानको नान्गारहार प्रान्तस्थित शिर्जाड जिल्लामा कम्तीमा २७ तालिवान लडाकूको मृत्यु भएको खबर बाहिर आएको छ । तालीवानी समूहले कब्जा गरेको भनिएको ठाउँ(शिर्जाड)बाट उनीहरुलाई हटाउने ...
इन्डोनेसियामा लगातार भूकम्पको २० वटा धक्का
जकार्ता । इन्डोनेसियाको मध्य सुलावेसी प्रान्तलाई केन्द्र बनाएर शुक्रबार अपराह्न गएको ६.८ म्याग्नीच्यूडको भूकम्पपछि कम्तीमा २० वटा परकम्प गएको छ । इन्डोनेसियाको जलवायू तथा भौगर्भिक विभागले निकै ठूला प...
काठमाडौं । एउटा अनौठो प्रेमकहानी पछिल्लो समय चर्चाको विषय बनेको छ । जापनका एक युवक यासुशी ताकाशाहीले आफ्नी प्रेमिका नातासुकीलाई राखेको अविश्वासनीय प्रेम प्रस्ताव चर्चाको केन्द्र बनेको हो। उनले प्रेमिक...
शान्तीको निम्ति पोपले चाले यस्तो कदम
भ्याटिकन सिटी । पोप फ्रान्सिसले दक्षिण सुडानको बिग्रदो राजनीतिक स्थिति सम्हाल्ने हेतुले अफ्रिकन मुलुक सुडानको सत्तारुढ र प्रतिद्वन्द्वी नेताको खुट्टा छुन पुगेका छन् । अफ्रिकन नेताहरुको लागि आयोजना ...
क्वेटा । पाकिस्तानको बलोचिस्तान प्रान्तको राजधानी क्वेटामा आज(शुक्रबार) बिहान भएको एक बम बिस्फोटमा १६ जनाको मृत्यु भएको छ भने ३० जना गम्भीर घाइते भएका छन् । क्वेटा प्रहरी उपरीक्षक अब्दुल राजाकका अनु...
ब्ल्याक होल कालो हुँदैन
एजेन्सी । खगोलविद्हरुले बुधबार कालो छिद्र(ब्ल्याक होल)को पहिलो फोटो सार्वजनिक गरेका छन् । ४० अरब किलोमिटर क्षेत्रफल रहेको उक्त ब्ल्याक होल पृथ्वीभन्दा ३ लाख गुणा ठुलो रहेको छ । जसलाई खगोलविदहरुले अहि...
पृथ्वीभन्दा ३० लाख गुणा ठुलो ‘ब्ल्याक होल’को पहिलो फोटोले केके बताउँछ ?
पेरिस । खगोलविद्हरुले बुधबार कालो छिद्र(ब्ल्याक होल)को पहिलो फोटो सार्वजनिक गरेका छन् । ४० अरब किलोमिटर क्षेत्रफल रहेको उक्त ब्ल्याक होल पृथ्वीभन्दा ३ लाख गुणा ठुलो रहेको छ । जसलाई खगोलविदहरुले अहिले...
‘मोदी इजराइलका प्रधानमन्त्री नेतन्याहू जस्तै छन्’ – पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री खान
काठमाडौं । पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खानले यदि भारतकोआम चुनावमा भाजापाको जित भए र नरेन्द्र मोदी पुनः प्रधानमन्त्री भए शान्ति वार्ताको सम्भावना अत्यधिक रहने बताएका छन् । मंगलबार विदेशी पत्रकारसँ...
लण्डनबाट न्युयोर्क १ घण्टामा यात्रा
काठमाडौं । तीव्र गतिमा उडान भर्दाको समयमा जेट इन्जिन पग्लने अवस्था रोक्ने प्रविधिको सफल परीक्षण गरेपछि हाइपरसोनिक जेटको यात्रा सम्भव हुन भएको छ । रियाक्सन इन्जिनका अनुसन्धानकमीहरुले ३.३ म्याक अर्थात ...
भारतले जारी गर्यो राडारबाट लिइएका तस्बिर, पाकिस्तानले भन्यो ‘झुट’
पाकिस्तानले भारतीय वायुसेनाको त्यो दाबी खारेज गरेको छ जसमा भारतले फेब्रुअरी २७ मा पाकिस्तानको एफ–१६ लडाकू विमान नष्ट गरेको दाबी गरेको थियो । पाकिस्तानले सेनाको प्रवक्ता मेजर जनरल आसिफ गफूरले ट्वीट गर...
अमेरिकाले गर्यो इरानी सेना ‘आइआरजीसी’लाई आतंककारी संगठन घोषित
काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले इरानको रिभोल्युशनरी गार्ड कर्प्स (आइआरजीसी) लाई विदेशी आतंककारी संगठन घोषित गरेका छन् । अमेरिकाले पहिलो पटक अन्य देशको सेनालाई आतंककारी संगठन घोषणा गरेको ...
हफ्तार विद्रोही र सरकारी सेनाबीच भिडन्त, ३५ को निधन
लिविया । सन २०११ मा लिवियाका नेता कर्णेल गद्याफी मारिए सँगै लिविया अशान्त छ । मुलुक भित्र रहेका अनेकौं शक्तिहरु तेलकुवा कब्जा गर्न अनेकौं भिडन्त गरि रहन्छन् । गत चार दिन देखि लगातार लिवियाको राजधानी त...
४ मिटर लम्बाईको अजिङ्गर किन समातियो ?
फ्लोरिडा । ४ जनाको एक समूह लगातार उभिए । उनीहरुको हातमा लगभग ४/४.५ मिटर लामो अजिङ्गर थियो । जसले एउटा मृग सजिलै निल्ने तागत राख्छ । सो फोटोले सामाजिक सञ्जालमा एकाएक चर्चा बटुल्यो । के थियो फोटोमा ...
मोहम्मद नाशीदको पार्टी दुई तिहाईको नजिक
माले । माल्दिभ्समा गत शनिबार सम्पन्न निर्वाचनको प्रारम्भीक नजिता प्राप्त भएको छ । प्राप्त नतिजा अनुसार संसदको कुल ८७ स्थानको निम्ती सम्पन्न निर्वाचनमा पूर्व राष्ट्रपति नाशीदको पार्टी मालदिभियन डेमोक्र...
चर्चा बटुल्दै नेपाली कुकुर, जो ७००० मिटर अग्लो हिमाल चढी
काठमाडौं । न्याना कपडा र उपकरण सहितको पूर्ण तयारीबिना हरकोही अग्ला हिमाल चढ्न सक्दैनन् । तर एउटा कुकुर सात हजार मिटर(२३, ३८९ फुट)भन्दा अग्लो हिमालको शिखरमा पुग्न सफल भएको छ। 'मेरा' नाम दिइएकी सो पोथ...
क्राइस्टचर्च मस्जिद आक्रमणका आरोपी टारेन्टको मानसिक स्वास्थ्य परीक्षण गर्न अदालतको आदेश
न्यूजिल्यान्ड । न्यूजिल्यान्डको क्राइस्टचर्चस्थित दुईवटा मस्जिद गत मार्च महिना गरिएको आक्रमणका प्रमुख आरोपी ब्रेन्टन टारेन्टको स्वास्थ्य परीक्षण गराउन आदेश दिइएको छ। मुद्दाको सुनुवाइका लागि मानसिक...
यूएईमा नेपाली सवार ट्याक्सी दुर्घटना, २ जनाको मृत्यु
यूएई । युनाइटेड अरब इमिरेट्सस्थित आबुधाबीमा उपचारका लागि अस्पताल जाँदै गरेका २ नेपाली सवार ट्याक्सी दुर्घटनामा परेकाको छ । नेपाली सवार ट्याक्सीलाई कारले ठक्कर दिँदा उनीहरुको मृत्यु भएको हो । दुर्घटन...